China Kugadziridza Fenicha Vagadziri uye Vanotengesa | Dongfang
Zvimiro 1. Steam Reformer inogadzirisa mune hydrogen kugadzira unit ine kutendeuka basa, iri kiyi yemidziyo yemidziyo. 2. Iyi sosi yekudiridza echoto ndiyo yakakosha ekunze yekupisa tubular reactionor, iyo yakagadzirirwa sehando yemhando yechimiro chechoto chekushisa nekuda kwekuita kwayo kwakasimba endothermic uye kupisa kwakanyanya mukugadzirisa. 3. Catalyst inopisa zvakananga mumabhindauko ekugadzirisa, uye maitiro emidhiya kuburikidza nemubhedha unoshungurudza kuti uite. 4. Unhu hwacho ...
1. Steam Reformer igadziriso mu hydrogen kugadzira unit ine kutendeuka basa, iri kiyi yemidziyo yemidziyo.
2. Iyi sosi yekudiridza echoto ndiyo yakakosha ekunze yekupisa tubular reactionor, iyo yakagadzirirwa sehando yemhando yechimiro chechoto chekushisa nekuda kwekuita kwayo kwakasimba endothermic uye kupisa kwakanyanya mukugadzirisa.
3. Catalyst inopisa zvakananga mumabhindauko ekugadzirisa, uye maitiro emidhiya kuburikidza nemubhedha unoshungurudza kuti uite.
4. Unhu hunopatsanura uyu anogadzirisa mushambadzi kubva kune imwe nzvimbo yekudziya ekuisa magetsi inoda kutariswa, kusanganisira nechoto svumbunuro, tube zvinhu, kuwedzera kwepombi system pamwe nemubhadharo, mwenje, kuyerera kwegasi uye kugovera, zvinhu zvinopesvedzera, nezvimwe.
300,000t / y Kuenderera mberi Kugadzirisa Dhizaina
1 miriyoni t / y Kuenderera mberi Kugadzirisa Dhizaina
1,2 miriyoni t / y Kuenderera mberi Kugadzirisa Dhizaina
1,4 miriyoni t / y Kuenderera mberi Kugadzirisa Dhizaina
Yapfuura: Mhepo preheater
Inotevera: Incinerator Magetsi
Malo Chikamu cheKuisa , Railway Kukurukura , Kuderedza Block , Chill Mvura Muchina , Ironworks , Rail Transit ,